Pakistan: Aasia sy Aafia – Ny tantarana vehivavy Pakistane roa · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 15 Desambra 2010 8:32 GMT
Vakio amin'ny teny Español, Nederlands, বাংলা, Français, English
Anaty fotoana iray izay mbola maha-lany fanahy sy mahatohina izao tontolo izao noho ny fanamelohana ho faty an'i Aasia Bibi amin'ny resaka fitenenan-dratsy ny finoana, dia sahiran-tsaina ny amin'io tranga miteraka fanoherana io koa ny Pakistane. Ny firenena iray manontolo no mahatsiahy an'i Dr Aafia amin'io ary samy mampitaha ireto tranga roa ireto na ny vahoaka na ny mpampahalala vaovao. Noho izy roa samy manohitra ny foto-kevitra fototry ny fitoviana sy ny rariny
Araka ny tatitra dia maro ny Pakistane no mahatsiaro ho voakasika ihany koa amin'ny tranga mahazo an'i Aasia Bibi (vehivavy pakistane kristiana iray voaheloka ho faty fa hoe naniratsira finoana) sahala amin'ny fanahian'izy ireo momba ny fitazonana an'i Aafia Siddiqui (voaheloka hifonja 86 taona any Etazonia). Saingy mampalahelo ny fahitàna fa haingam-pandeha foana manerana izao tontolo izao ny hafatra feno fankahalàna miohatra amin'ny hafatra mitory fandriampahalemana.
Toy ny anoratana'i Harris Khalique azy ao anaty tsanganany
Tsy ela akory izay dia nanoratra tao amin'ny Pakistan Observer aho mikasika io olana io:
Ahmed Quraishi, mpanoratra momba ny politika ho an'ny vahoaka dia nanamarika hoe,
Araka ny Matoandahatsoratry ny Express Tribune,
Vantany vao novolavolaina ny lalàna Pakistane momba ny fitenenan-dratsy ny finoana dia efa nohelohin'izao tontolo izao. Tamin'ny herinandro lasa ny Papa Benoît XVI dia nitaky ny famotsorana an'i Bibi ary nanambara fa ny kristiana ao Pakistan dia “matetika loatra no iharan'ny herisetra sy ny fanavakavahana”
Araka izay anipihan'ilay Pakistane mpanao gazety azy, Mahtab bashir, ao anaty lahatsorany mitondra ny lohateny hoe ‘Aasia Bibi, Blasphemy and Chief Justice’ Aasi Bibi, ny fitenenan-dratsy ny finoana ary ny Filohan'ny Fitsarana’
Toy izay ampahatsiahivan'i Ayesha Siddiqa azy ho antsika ao amin'ny lahatsorany mitondra ny lohateny hoe “Sacrifice at the altar of pragmatism” (Sorona eo ambony alitaran'ny pragmatisma – foto-pisainana mitory ny hoe ny hevitra entina momba ny zavatra iray dia miankina betsaka amin'ny fampiharana azy eo amin'ny fiainana)